Home Wararka Khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay Galguduud
Khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay Galguduud
Wararka ka imaanaya degmada Balanbale ee Gobolka Galguduud ayaa sheegaya in halkaasi uu maanta ka dhacay dagaal dhaliyay khasaare kala duwan oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed.
Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Hiraale oo Galbeed ka xiga degmada Balanballe waxaana uu u dhaxeeyay maleeshiyo ka kala tirsan laba beel oo halkaasi wada dega.
Inta xaqiijiyay dagaalka waxaa ku geeriyooday lix ruux oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay, halka ay ku dhaawacmeen sideed ruux.
Ma ahan markii u horreeysay ee uu dagaalka ka dhaco deegaanka Hiraale, dagaalada u dhaxeeya beelahan walaalaha ka dhaca deeganada u dhaxeeya Gurceel iyo Balanballe.
Previous articleShacab badan oo ku dhintay Qarax ay Alshabaab ka fulisay Magaalada Mandheera, Kenya
Next articleMaxaa kasoo baxay kulankii R/W Rooble iyo dhigiisa Imaaraadka Carabta?
Magalada Gaalkacyo oo sicirbarar baahsan uu kajiro